Muxuu salka ku hayaa safarka Muuse Biixi ee Mareykanka? | KEYDMEDIA ENGLISH
Muxuu salka ku hayaa safarka Muuse Biixi ee Mareykanka?
Somaliland ayaa ku fashilantay aqoonsiga mudo 30 sano ah raadinaysay, iyadoo isku-daygii ugu dambeeyay ee UK uu kusoo dhamaadey guul-darro, islamarkaana uu noqday hal-bacaad lagu lisay.
HARGEYSA, Soomaaliya - Madaxweynaha Maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa Maanta safar ugu ambabaxay dalka Mareykanka, isagoo sii maray wadanka Itoobiya, oo albaab u ah, marka uu booqasho dibadda aadayo.
Muuse Biixi ayaa mudo sugayay safarka Washington, isagoo ka dhiganaya waxqabad maadaama ay doorasho kusoo foodleedahay sanadkan, oo Musharax u yahay Xisbiga haya talada ee Kulmiye.
Wasiiro dhowr ah ayaa ku wehliya safarkiisa, kuwaasoo Fiisaha kasoo qaatey Safaaradda Mareykanka ee Jabuuti, iyagoo ku safraya Baasaboorka Jabuuti, maadaama midka Somaliland aan la aqoonsanayn.
Muuse Biixi ayaa waxuu Mareykanka kula kulmi doonaa Jaaliyadda Somaliland, waxaana uu isku dayi doonaa inuu raadiyo Mas'uuliyiin kamid ah Maamulka Biden, oo la kulmo, isagoo suuq-geynayao Madaxbanaanida Somaliland, oo mudo 30 sano la waysan yahay.
Somaliland ayaa ku fashilantay aqoonsiga ay raadinaysay tan iyo 1991, iyadoo isku-daygii ugu dambeeyay ee UK uu kusoo dhamaadey guul-darro, islamarkaana uu noqday hal-bacaad lagu lisay.
Muuse Biixi ma casuumin dowladda Mareykanka, wuxuuna ku socdaa sida la sheegay casuumaad gaar ah, waxaana lagu soo waramayaa in banaanbax isaga ka dhan ah in lagu diyaariyay Washington, kaasoo ay dhigayaan Jaaliyadda Koonfur Galbeed oo dacwad ka gudbiyay barakicintii reer Koonfurta Laascaanood lagu sameeyay 2021.
Comments Topics: muuse biixi somaliland soomaaliya